Version 0.4.1 – Haingana kokoa ho an'ny mpanjifa
Janoary 13, 2010 amin'ny tolotra 2 Comments
Ny asa natao ihany koa tamin'ny optimizing ny .css antontan-taratasy, miaraka amin'ny fampihenana ny isan'ny inclusions mba ambanin'ny fampiasana ara-dalàna any anaty filatron-dahatsoratra dia ho iray ihany no nampiasa rakitra.
Raha mizara na inona na inona ho anao, eo amin'ny navigateur misy na foto-kevitra. Aoka isika hahafantatra.
Indrisy anefa fa, fanafahana izany dia tsy ahitana fanohanana ny jQuery 1.4 toy ny misy ny bibikely ao amin'ny jQuery UI vakizoro izay manakana ny hanatsarana amin'izao fotoana, Dia mety hanatsarana ny manaraka indray mandeha dikan-jQuery UI mandeha velona.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: tsy ampy taona, fanafahana, hafainganam-pandeha enhancements, WordPress plugin
Janoary 18, 2010 amin'ny 12:34 am
Aho Version 0.4.1 ary XML Sitemap Generator ny WordPress 3.2.2 nametraka.
Miasa tsara ny zava-drehetra ankehitriny. Fa amin'ny 1000 Fandraisana anjara sy ny 30 Fiteny, mipoaka Sitemap.xml
Indrisy anefa fa tsy haharitra ny XML zarao ary nolavin 'Google. Misy vahaolana
Janoary 18, 2010 amin'ny 1:20 am
Raha ny fantatro Google manaiky ho amin'ny 50,000 urls isan-Sitemap, ka tokony ho nanao azy. Afaka mandefa ny fahadisoana ianao hafatra?
Tsy mahita trano ao amin'ny Google-XML-sitemaps ny niantsoany an'ireo antontan-taratasy, ka na dia ny google manohana izany, Nahazo”T nanapaka izany.
Inona no azo atao dia mampihena ny isan'ny fiteny noho izay hiteraka sitemaps, Azo atao izany ao amin'ny transposh lelam-pitana, aoka hahafantatra raha tianao izany.
Rich amin'ny Version 0.9.9.2 – Tsy git
Alvaro amin'ny Version 0.9.9.2 – Tsy git
jackly amin'ny Version 0.9.9.2 – Tsy git